Super Mario Run dia avy amin'ny fampiharana 50 avo indrindra amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Super Mario Run dia latsaka avy amin'ny fampiharana 50 avo lenta indrindra amin'ny iOS
Ignacio Sala | | Lalao IPhone, About us
Rehefa miomana hankafy ny Super Mario Run ireo mpampiasa Android, izay kasaina hanombohana amin'ny volana martsa, dia tadion'ilay tadion'ny mpitrandraka rano avokoa ny tsinain'ny birao fandefasana azy. Betsaka ny mpampiasa no nitsikera fa ity lalao ity dia manana vidiny lafo, 10 euro, hahafahany milalao ny fizarana rehetra natolony taminay, izay mety hanery an'i Nintendo hamerina handinika ny lalao amin'ny alàlan'ny fanolorana fividianana rindrambaiko ho solony ho an'ireo mpampiasa rehetra te hanohy hankafy ambaratonga vaovao.
Super Mario Run dia nahatratra ny App Store tamin'ny 15 Desambra, nahatratra 40 tapitrisa ny fisintomana tao anatin'ny efa-andro monja ary lasa iray amin'ireo lalao mitombo haingana indrindra hahazoana 36 tapitrisa dolara amin'ny varotra. Super Mario Run, tsy manana fividianana ao anaty fampiharana, ka, araka ny nampoizina, ny fidiram-bola vokariny amin'izao fotoana izao dia nilatsaka be raha oharina amin'ny fiheverana voalohany. Ny safidy tokana ahafahana manohy mankafy ny lalao feno dia ny mandoa 10 euro Vola, vola izay, araka ny efa nanamarihako tetsy ambony, dia tsy azon'ny mpiserasera marobe, na dia mahatoky toy inona aza izy ireo amin'i Mario.
Araka ny angon-drakitra nomen'ny SensorTower, ny fampiharana dia nampidina ny bara ho an'ireo fampiharana 50 izay mahazo vola be indrindra ao amin'ny App store, toerana iray izay nitazomana azy hatramin'ny nanombohany, iray volana sy dimy andro lasa izay. Ao amin'ny sary dia hitantsika ny fomba nahitana fahombiazana lehibe nandritra ny dimy andro voalohany, saingy Rehefa nandeha ny andro dia nihena ny zanabola sy ny vola vokariny. Ny filokana manaraka an'i Nintendo dia ny Fire Emblem: Heroes, izay kasaina hatao amin'ny 2 Febroary, na dia ho tonga eo amin'ny sehatra Android aza io ary amin'ny iOS any aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Super Mario Run dia latsaka avy amin'ny fampiharana 50 avo lenta indrindra amin'ny iOS
Mahamenatra!! Toy izany koa amin'ny zava-drehetra, voalavo toy izany isika ... ka tsy mandany € 10 amin'ny lalao feno, nefa tsy mampaninona anay ny mandany 100/200 amin'ny sigara, alikaola sns sns sns. Tsia, tsy misy .. hanohy ny lalao amin'ny fampiharana manomboka amin'ny € 0'99 hatramin'ny € 99 ka tsara kokoa .. tsy mandoa ireo € 10 ireo ianao ary handoa in-40 bebe kokoa, raha te handroso ianao.
Izaho;) dia hoy izy:
Mbola handoa bebe kokoa aza aho raha mendrika ny lalao fa tsy toy izany, toa be loatra amiko ny fampitahana.
Valio i Yo;)
Sarobidy isaky ny denaria izany, mazava ho azy raha tsy tianao .. tsy hisintona na hividy azy ianao, mahafinaritra be! Ny hany lesoka nametrahako azy ... dia ny tokony ho maimaim-poana, izany hoe, mifindra amin'izay tianao, ny tiana holazaina dia ny aleontsika manana lalao fampiharana iray ary mahamenatra izany! Fa maninona no ahazoantsika fisaorana ireo olona tsy mandany denaria, efa an-taonany maro izao .. Nametraka lalao aho ary nanala azy tamin'izany fotoana izany .. maninona aho no mandalo amin'ny lalao miaraka amin'ny fividianana entana, tena feno izany. scam, toy ny mitranga amin'ny lalao console sns ary izany dia mitranga satria tadiavintsika izany
gazpachete dia hoy izy:
Raha mody maimaim-poana izany dia handoa hatramin'ny 15 na 20 euro aho, saingy mahasosotra izany ary TSY MARIO izany. Te hihemotra aho! Iza no tonga tamin'ity vonoan'omby mpanamory mandeha ho azy ity?
Valiny amin'ny gazpachete
Eny, raha misy lalao kely navoakan'izy ireo 36 tapitrisa isam-bolana dia maka 1 isam-bolana izy ireo ary hihamaro hehehe
Apple nitory an'i Qualcomm $ 1.000 miliara